AMADODA ASEMGUNGUNDLOVU AKHALE ENTABENI NGODLAME LWABESIFAZANE – Sivubela intuthuko Newspaper
UDKT Muzi Sibiya wehembe elimhlophe ongumphathi woMgungundlovu 107.6 FM ephakathi kwamadoda abesentabeni
AKHUSHULELWE entabeni amadoda aseMgungundlovu eyohlunyeleliswa izimilo ngaphansi komkhankaso wokuxwayisa ngodlame lokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane okudla lubi kulezi nsuku. La madoda abekhushulelwe entabeni yaseMbubu eSweetwaters ngabe-Umzansi Youth in Business (UYB) nabe-Arise and Shine Foundation okuyizinhlangano eziholwa yintsha yaseMgungundlovu.
UMnu Jabulani Dlamini onguMqondisi we-Arise and Shine uthe izinjongo zabo beyinhlangano ngukwakha ubuntu kumuntu nokumfundisa ngezindlela ezinhle zokuphilisana. “Kube yintokozo ukubona abesilisa bezinikela kulokhu kuhlangana kwasentabeni ebesinakho lokho kusinikeze ithemba lokuthi maningi amadoda ayilambele inhlalakahle emakhaya. Sifuna ukubuyisa isithunzi sethu nokuhlonipheka emphakathini kungathi uma kubonwa umuntu wesilisa kube nabantu abagijima bayozivalela endlini,” ubeke kanje.
UMnu Ndumiso Zuma wezokuxhumana e-UYB uthe ukukhuphuka ngamandla kwezibalo zobugebengu esiteshini samaphoyisa asePlessislaer e-Edendale yikhona okubanyakazisile njengoba amacala amaningi enzeka KwaMpumuza ikakhulukazi eSweetawters. “Kuningi okuvelile laphaya njengoba sibuye saba nesigcawu sokubonisana singamadoda. Sithole ukuthi amadoda amaningi imiqondo yawo ilimele idinga ukucangcathwa njengoba yalimala ekukhuleni kwawo ngenxa yokuziphatha budlabha koyise emakhaya. Isiteshi sethu singesesithathu KwaZulu-Natal ngamacala odlame lobulili yingakho sihlele ukulaphana sodwa. Siyaxolisa kwamanye amadoda abephume ngobuningi bawo esigcine siwajikisa ngenxa yokugcina imibandela yeCOVID-19 yokuhlangana njengoba samukele angu-50, kodwa kusijabulisile ukubona abesilisa bayo yonke iminyaka benothando lokwakhiwa komuntu wesilisa,”kusho uMnu Zuma.
Lokhu kuhlangana kwamadoda bekuhanjelwe nanguMnu Thubelihle Zondi oyindodana yeNkosi uNsikayezwe Zondi ehola isizwe saKwaMpumuza eMgungundlovu obemele umkhandu wenkosi. Uthe usukumele phezulu ngoba izindawo ezakhele isizwe saKwaMpumuza okuyiSweetwaters kakhulukazi ziningi izigameko esezibikiwe zokuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane. Uthe uyathemba ukuthi ukuhlanganyela kwamadoda ndawonye kuzosiza ngobak ulapho ezogonyuluka abhodle ngokuwakhathazayo okugcina kuwenza ukuba abe nonya emndenini.